Ny tombotsoan'ny hafanana
Ny taona vaovao dia manodidina ny zoro, midika izany fa ny trano tsirairay dia hanana latabatra fety. Ankoatra ny "Olivier", ny herinjiro "eo ambanin'ny akanjo volom-borona" sy ny Champagna, dia ho fofona, ny tombotsoa izay tsy fantatry ny rehetra. Raha ny zava-misy dia tokony hampiasaina amin'ny fety fotsiny izy io, fa tsara ny mampiditra izany amin'ny sakafo isan'andro.
Ny fampiasana ny fiaraha-miasa amin'ny gilasy
Ny ranomandry dia mamerina indray ny faritra misy ny fibra fonosana izay vao haingana, ary mitahiry ny elasticité. Misy proteinina antsoina hoe collagen, izay misy ny vatan'ny olombelona. Mandritra izany, dia azo lazaina fa ny fitsaboana tena lehibe ho an'ireo voan'ny arthritis, arthrôs, dia tokony hampidirina ny fisotroana menaka maromaro amin'io lovia io.
Mahasoa ny mangatsiaka amin'ny zavamananaina manontolo
Ny karazana lolo rehetra: ny henan'omby, ny akoho ary ny kisoa dia manome. Ny fahasamihafana tokana dia ny kaloria .
Noho izany, manatsara ny asan'ny atidoha ny asidra aminoacetic, izay manimba ny fahatsiarovan-tena. Amin'ny vanim-potoanan'ny toe-javatra mampihetsi-po, ny hatsiaka dia, toy ny tsy nisy teo aloha, eny an-dalana.
Ny antony iray manan-danja, izay mahasoa ny hatsiaka, dia ny fisiana vitaminina B. Ny fiantraikany tsara eo amin'ny asan'ny rafitra rafitra manontolo. Ary ny retinol dia tsy manatanjaka ny hery fiarovan'ny hery fiarovana, fa miasa koa amin'ny antioxidant.
Kalorie votoatin'ny tranokely iray
Ny mpivady tsirairay dia manomana io sakafo mihinana io amin'ny fomba fiteniny. Ny zavatra tokana izay tsy miovaova dia ny sakafo, na ny fifangaroana ny hatsiaka miaraka amin'ireo zava-manitra isan-karazany, snap. Tsotra tsotra izao ny tsiambaratelo: na dia be aza ny jelatina, dia tena kôlôgrôla ny lovia, ary misy kolololola izany . Izany no mahatonga ny zana-ketsa hanina amin'ny voan-tsimparifary na ranomandry, mba hampihena ny entana mavesatra eo amin'ny atiny. Eto ambany ny latabatra iray mampiseho ny votoatin'ny kalôria.
Prunes - toetra mahasoa
Sarobidy ve ny serizy?
Karoty - votoatin'ny kaloria
Sakafo tsara - sakafo maraina
Ny tombontsoa amin'ny Pumpkins
Sinoa shinoa - kaloria
Cranberries na cranberries - inona no ilaina kokoa?
Nahoana no ilaina ny mikroba?
Inona no sakafo misy ny iodine?
Inona no atao hoe kafe mangatsiatsiaka haingana?
Nahoana no ilaina ny vary?
Cocktails amin'ny fahaverezan'ny lanjany - resipe
Maka tombony amin'ny bao
Hippy dite ho an'ny fihomehezana
Inona no azoko omena zaza iray ao anatin'ny 4 volana?
Goose miaraka amin'ny prunes sy apples
Fefy ho an'ny fandriana
Ski Resort Bled
Kevin Federline nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany tamin'ny oram-baratra sy ...
Ny fanadiovana ny vatana ho an'ny fahaverezan-danja ao an-trano
Biography of Gina Lollobrigida
Histolojia taorian'ny fitondrana vohoka
Toro-takelaka ho an'ny fefy
Samy miahiahy ny fanorisorenana ara-piraisana ny roa tonta avy any Weinstein
Ny fomba grika amin'ny akanjo
Manimba ve ny saka?
Voninkazo avy amin'ny servietta
Bifiform Baby - fampianarana
Cake "Napoleon" - dikan-teny niandohana momba ny fofona sy ny fanandramana mofomamy